Food, Drink & Recipes » မားနန်း လက်ရာ – KZ’s ထမင်းဆိုင်	14
ငါးကြော်ပဲငါးပိချက်ကတော့ ငါးကို ကြော်ထား , ကြက်သွန်ဖြူ တပြားရိုက် , ကြက်သွန်နီ နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးကို လေးစိတ်ထိုးပြီး ထက်ဝက်ခြမ်း, ဂျငိးကို ပြားပြားလေးလှီးပြီး အချောင်းရှည်လေးတွေဖြစ်အောင် ရိတ်ရိတ်လှီး.. ဆီနဲနဲနဲ့ အရင်ကြော် , တရုတ်ပဲပုတ်စေ့ နဲ့ ငရုပ်ချဉ်ရည် နဲနဲထည့် , ကော်မှုန့်ကို ရေဖျော်ပြီး ထည့်.. စားခါနီးမှ ပြန်တည်ပြီး ငရုပ်ပွလေးတွေ လက်တဆစ်လောက်ထည့်ပြီး ကြော်ထားတဲ့ ငါးကြော်ပေါ်ကိုလောင်းချလို့ ကြက်သွန်မိတ်လေးတွေ အုပ်လိုက်ရင် ရပါပြိလို့.
ဝက်သားလုံး ရှမ်းချက် မွှေးမွှေးလေး အသုပ်က ငါးဖယ်ပေါင်းကိုပဲတောင့်ရှည်အစိမ်းနဲ့ ငါးပိလေးနဲ့ သုပ် ..
ပုဇွန်ခေါင်းမပါ အသားချည်းပဲဝယ်… အတုံးလေးတွေလှီး နာနတ်သီး အတုံးလေးတွေလုပ်.. ကြက်သွန်ဖြူရိုက်ပြီး နီလေးစိတ်ထိုး ခရမ်းချဉ်အတူံးလေးတွေလှီး .. ဂျင်းကို အပြားလိုက်ပါးပါးလှီးပြီး အချောင်းရှည်လေးဖြစ်အောင်ပြန်လှီးဖြတ်ထား … ငရုပ်ပွ အတုံးလေးတွေလှီး… ဆီနဲနဲနဲ့ ဖြူနီ ကြော် ဂျင်းကြော် ခရမ်းချဉ်သီးထည့်လို့ အနံလေးတွေထွက်လာရင် ပုဇွန်ထည့် နာနာတ်သီးထည့် ကြက်ာဆော့ထည့်ပြီး ငရုပ်ပွထည့်ကြော်လိုက်ရင် ရပြီ.. ချို ငံ ထည့်တာတွေ ပြောတော့ဘူး
ရေပြောင်းဖူး ကအခွံခွာ အော်စွန်းနဲ့ ရေပြောင်းဖူး ကိုအချောင်းရှည်လေးတွေလှီး ..ရေစိမ်ထား ခါကြက်ဥလဲလှီးထား ခရမ်းချဉ်သီးပြုတ်တောက်တော်က်စင်း ကြက်သွန်ဖြူ ငရုပ်သီး တောက်တောက်စင်း နံနံပင် ပါးပါးလှီး . ငရုပ်သီးကြော်ပြီးသားလဲထည့် သံပုရာသီးညှစ် ပန်ထွေဖျော်လိုပဲပေါ့ .. အဲ့လိုလုပ်ထားပြီးမှ စားခါနီးမှ ရေစိမ်ထားတာတွေဆယ်လိုက် ဆားဟင်းချိုမှုန့်နဲ့နယ်.. ခုနက ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ထားတာလောင်းထည့် နယ်ပြီး အပေါ်ကနေ မြေပဲဆံထောငိးလေးဖြူး နံနံပင်အုပ်ပြီး စားလိူ့ရပြီ ပုဇွန်ထမ်းငံပြာရည်လေးပါထည့်လိုက်…မှိုဆီကြော်ရှိရင် ထညိ့သုပ်တယ်
ငှက်ပျောဖူး ဝယ် ၂ရေလောက်ပြုတ် … အရင့်တွေသင် ..အနုတေ်ွပဲရွေးထား ဖြူ နီ ထောင်း .. ခရမ်းချဉ်တလုံးလောက်တောက်တောက်စင်း. ဆီသတ် ပြီးမှ ငပျောဖူးထည့် နူးအိပြီဆို တရုတ်ကလာတဲ့ ပဲပုတ်စေ့ချဉ်ဗူး ထည့်ကြော်ပြီး ငရုပ်သီးတောင့်အခြောက်ကြော်လေးဖြူးလိုက်ရော
ဟင်းရည်မှာကျတော့ (ချက်တုန်းကတိုင်းအရွက်ပလက်တွေထည့်) ဟင်းရည်ထဲကို ဆား ဟင်းချိုမှုန့်ဂျင်း/ကြက်သွန်ဖြူ တပြားရိုက်လို့ ပဲပုတ်မှုန့် / ရာဖစ် (ရှမ်းလိုအခေါ် ဆေးခါးစပ်စပ်လေး) ထည့်လို့ နံနံပင်အုပ်ပြီး သောက်လိုက်ရုံ… ဟင်းရည်ကတော့ မလှပဘူးဖြစ်နေတယ် .. ဂျင်း/ကြက်သွန်ဖြူ ခရမ်းချဉ်နဲနဲနဲ့ ဟင်းရည်တည်ထား အရွက်နဲနဲအုပ်ထား (စားခါနီးမှ အသားလုံးထည့် နွေးလိုက်မလို့)
မှိုချက် တာကြတော့ ဖြူနီထောင်း /ခရမ်းချဉ်တောက်တောက်စင်း , အာ့တွေ ဆီသတ် / ဆီပျံလာ မှိုထည့်ချက် မှိုရခါနီးမှ ကန်ဇွန်းရွက် နဲနဲထည့် ငရုပ်သီးစိမ်းတောင့် ရိုက်ပြားလေးထည့်လ်ု့ မွှေးမွှေးလေးနဲ့ စားလို့ရပါပြီ
ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီး ပုဇွန်ခြောက်ကို ထောင်း၊ သံပုရာသီးညစ်ပြီး ဟင်းရည်ထဲက အရွက် / မှိုချက်နဲ့ မြှုပ်စား
ငါးမာလာချက်​လဲ မာလာအနှစ်​ဝယ်​လိုက်​တာ .. ကြက်​သွန်​ဖြူနီ ​ထောင်း ခရမ်းချဉ်​​တော်က်​​တောက်​စင်း . ငါးကိုအရင်​​ကြော်​ထား . ပြီးရင်​ ခရမ်းချဉ်​အနှစ်​ဆီသတ်​ထဲ့ထဲ ဆား​ကောထည့်​ချက်​ / ဂျင်းပါးပါးရှည်​ရှည်​​လေး​တွေလှီး မာလာနှစ်​ထည့်​… . ငါးထည့်​ပြီး… ပင်​စိမ်း ဖက်​ဖယ်​ ကုလားနံနံ အုပ်​လိုက်​တာ
အာလူးကိုပြုတ်​ . ​စေး​နေ​အောင်​​ထောင်း . ကြက်​သွန်​ဖြူ ရိုကိပြား . တရုတ်​မုန်​ညင်းချဉ်​အစပ်​ကို ရိတ်​ရိတ်​လှီးထား . ဆီပါးပါး​လေးကို ကြက်​သွန်​ဖြူ ထည့်​​ကြော်​ မူန်​ညင်းချဉ်​ထည့်​ . ပြီးရင်​​ထောင်းထားတဲ့အာလူးထည့်​ . ​ကော်​မှုန့်​နဲနဲနဲ့​ရေနဲ့ ​ဖျော်​ထားတဲ့ အရည်​ထည့်​ . ​ပျော့ပြီး​ရေခမ်းပြီထင်​ရင်​ ခူးလိုက်​ပြီး ငရုပ်​​ကြော်​ဆီဆမ်းပြီး စားရုံပဲ . တရုတ်​ဟင်းအားလုံး ဆား​ကော နဲနဲဆီထည့်​တယ်​​နော်​
စွန်​ထန်​​ခြောကိကို ​ရေ​ဆေး . အရိုးဟင်းရည်​ရှိရင်​ ပို​ကောင်းတယ်​…. . အရိုးဟင်းရည်​ထဲ ဆွန်​တန်​​ခြောက်​ထည့်​ . ဟင်းရည်​ထည့်​မယ့် ပန်းကန်​ထဲ . ကြက်​သွန်​ဖြူ ဂျင်းငရုပ်​သီးစိမ်း ရိုက်​ပြား . ခရမ်းချဉ်​ ကြက်​သွန်​နီ ​လေးစိတ်​ထိုး . နံနံပင်​ထည့်​ . စားခါနီးမှ ဆွနိထန်​​ခြောကိနဲ့ အရိုးဟင်းရည်​​လေး​လောင်းထည့်​ . နမ်းဆီ​မွှေး တစက်​ ၂စင်​ထည့်​ . အချို ငံ ထည့်​တာ ​ရေး​တော့ဝူး . ကွကိုယ်​မြည်းကြ​တော့ . ဟီး
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ဟင်းခွက်အားလုံးစားလို့ကောင်းမဲ့ပုံပဲ..သွားရည်တောင်ကျလုလု
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .အာလူးထောင်း၊
ဇီဇီခင်ဇော် says: အော်စွန်း ဆိုတာ ဆလပ်ရိုးလို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ရေပြောင်းဖူးလည်းမကြားဖူးဘူး..ငိငိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: http://mandalaygazette.com/wp-content/uploads/2016/01/42.jpg
ရေပြောင်း (ခေါ်) ရေပြောင်းဖူး (ခေါ်) စပါးဥ ပင်များကို ရှမ်းပြည် တောင်ကြီး နှင့် ကလေးမြို့များတွင် ပေါများစွာတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ တကယ်တော့…..ရေပြောင်းဖူး ဆိုတာက Wild rice စပါးပင်ရဲ့ ပင်စည်နုနုကို ခူးယူစားသုံးကြတာဖြစ်လို့ စပါးဥ (သို့) စပါးဖူး ဆိုတဲ့ နာမည်လေးနဲ့ ပိုပြီး လိုက်ဖက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဆိမ့်သက်သော အရသာရှိပြီး ၀က်သားနှင့်ကြော်စား သူ့ချည်ဘဲသုတ်စား အရောအနှောများ ကြာဇံ နှစ်သက်ရာများအသီးနှံများနှင့်လည်း ချဉ်ငံစပ် သုတ်စားလေ့ ရှိပါတယ်။ ရေပြောင်းပင်မှ ရရှိသော စပါးစေ့ (ဆန်) ကို ချက်ပြုတ်စားသုံး၍ ရသလို ပင်စည်ရိုးတံကိုလည်း ဦးထုပ် (သို့) လက်ကိုင်ပိုက်ဆံအိတ်လေးများလည်း ပြလုပ် ရောင်းချလေ့ရှိပါတယ်။ Admin (IVU Plant lover’s)
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .Thank you KZ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: သွားရည်ကို ယိုသွားတာပဲ
ဇီဇီခင်ဇော် says: မမဂျီး ဆို ဒိုင်းယက်နေရင်း ပို့(စ) တင်ရတာ စဉ်းစားကြည့်
alinsett says: TUESDAY အတွက် ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ…
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: တစ်နေ့မှ နှစ်ထောင်ဘဲရဒါဘာဆို ဒါဒွေဘီလိုချက်စားနိုင်မှာဒုံးအရပ်ဂဒို့ရဲ့
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပိုရှာအေ။
အောင် မိုးသူ says: တစ်မျိုးယူသွားသည်။
မမချွိ says: ယူစေသတည်း